သတ္တဝါအသစ်များ - ဆွစ်ဇာလန်၏ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဘုရားကျောင်း
ဆောင်းပါး > Tammy Tkach > အသစ်သောသတ္တဝါများ
အစေ့များ၊ ကြက်သွန်နီ၊ ဥများ၊ ခူကောင်များ။ ဤအရာများသည်စိတ်ကူးစိတ်သန်းများစွာကိုပေါ်ပေါက်စေသည်မဟုတ်လား။ ဒီနွေ ဦး မှာမီးသီးတွေစိုက်လိုက်တဲ့အခါငါအနည်းငယ်သံသယဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒီအရုပ်ဆိုး၊ အညိုရောင်၊ kyရာမမီးသီးများသည်အထုပ်တံဆိပ်ပေါ်တွင်လှပသောပန်းများကိုမည်သို့ဖော်ထုတ်နိုင်မည်နည်း။
ကောင်းပြီ၊ အချိန်အနည်းငယ်၊ ရေနည်းနည်းနှင့်နေရောင်နည်းနည်းဖြင့်ကျွန်ုပ်၏သံသယများမှာအစိမ်းရောင်ပိုးမွှားများသည်မြေပြင်မှပထမဆုံးအကြိမ်ထွက်လာသည့်အထိကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်သွားသည်။ ထို့နောက်ဘူးသီးများပေါ်လာသည်။ ထိုအခါပန်းရောင်နှင့်အဖြူရောင်၊ ၁၅ စင်တီမီတာရှိသောပန်းပွင့်သည်။ ဒါကြောင့်အဘယ်သူမျှမမှားယွင်းသောကြော်ငြာ! တကယ်အံ့ဖွယ်ပါပဲ။
တစ်ဖန် နာမ်တရားသည် ရုပ်၌ ထင်ဟပ်၏။ ဟိုဟိုဒီဒီကြည့်ရအောင်။ မှန်ထဲမှာကြည့်ရအောင်။ ဤဇာတိပကတိ၊ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်သော၊ အချည်းနှီးသော၊ လောဘကြီးသူ၊ ရုပ်တုကိုးကွယ်သူ (စသည်တို့) သည် 1 ပေတရုတွင်ကဲ့သို့ သန့်ရှင်းပြီး စုံလင်ခြင်းသို့ မည်သို့ဖြစ်လာနိုင်မည်နည်း။ 1,15 မဿဲ 5,48 ဟောကိန်းထုတ်? ဤအရာသည် စိတ်ကူးစိတ်သန်းများစွာ လိုအပ်သည်၊ ကံကောင်းထောက်မစွာဖြင့် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ကြွယ်ဝစွာပိုင်ဆိုင်ထားသည်။
ငါတို့ကဲ့သို့မြေ၌ကြက်သွန်နီသို့မဟုတ်မျိုးစေ့ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏။ သူတို့သေသွားပြီ သူတို့ဘဝ၌ဘဝရှိသည်ဟုမထင်ရ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ခရစ်ယာန်များမဖြစ်လာမီကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များအတွက်အသေခံခဲ့ကြသည်။ ငါတို့မှာဘဝမရှိဘူး။ ပြီးတော့တစ်ခုခုဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ် ယေရှုကိုစပြီးယုံကြည်လာတဲ့အခါသတ္တဝါအသစ်တွေဖြစ်လာတယ်။ ခရစ်တော်သည်သေခြင်းမှထမြောက်စေသည့်တူညီသောတန်ခိုးတော်သည်လည်းငါတို့ကိုသေခြင်းမှထမြောက်စေခဲ့သည်။
ကောရိန္သု ၂ တွင်ပါရှိသည့်အတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့သည် အသက်တာသစ်ကို ပေးအပ်ခံရသည်။ 5,17 ဆိုလိုသည်မှာ- “လူတစ်ဦးသည် ခရစ်တော်နှင့်စပ်ဆိုင်လျှင် ထိုသူသည် 'ဖန်ဆင်းခြင်းအသစ်' ဖြစ်နေပြီဖြစ်သည်။ အရင်တုံးက ပြီးသွားပြီ။ တစ်စုံတစ်ရာအသစ် (ဘဝသစ်) စတင်နေပြီ!" (Rev.GN-1997)
ခရစ်တော်၌ကျွန်ုပ်တို့၏ဝိသေသလက္ခဏာနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏ဆောင်းပါးတွင်လက်ဝါးကပ်တိုင်ခြေရင်း၌ "ရွေးချယ်ထားခြင်း" ကိုငါထားခဲ့သည်။ "New Creation" သည်ယခုအခါဒေါင်လိုက်ပင်စည်ကိုဖွင့်သည်။ ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုသူ၏မိသားစုဝင်များဖြစ်စေလိုသည်။ ထို့ကြောင့်သူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏တန်ခိုးအားဖြင့်အသစ်သောသတ္တဝါများကိုပြုလုပ်သည်။
အဲဒီကြက်သွန်နီတွေဟာ အရင်က ငါစိုက်ထားတဲ့ စိုက်ထားတဲ့ အတိုင်းမဟုတ်တော့ဘဲ၊ ငါတို့ယုံကြည်သူတွေဟာ ငါတို့အရင်တုန်းက ပေါက်ခဲ့တဲ့လူနဲ့ ထပ်တူမကျတော့ဘူး။ ကျွန်တော်တို့က အသစ်ပါ။ ငါတို့အရင်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ပုံစံကို မတွေးတော့ဘူး၊ ငါတို့အရင်ကလို တခြားသူတွေကို မဆက်ဆံတော့ဘူး။ နောက်ထပ် အရေးကြီးသော ခြားနားချက်တစ်ခု- ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တော်ကို တွေးတောဖူးသည့်အတိုင်း ခရစ်တော်ကို မတွေးတော့ပါ။ Rev. GN-1997 သည်2Corinthians ကိုကိုးကားသည်။ 5,16 အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်– “ထို့ကြောင့် ယခုမှစ၍ ငါသည် [ကမ္ဘာမြေတန်ဖိုးများ]၊ လူသားစံနှုန်းများနှင့်အညီ မည်သူကိုမျှ ငါစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းမပြုတော့ဘဲ၊ တစ်ချိန်က ငါစီရင်ခဲ့သော ခရစ်တော်ကိုပင် [ယနေ့ငါသည် ယခင်ကနှင့် အလွန်ခြားနားစွာ သိခဲ့ရသည်]။
ကျွန်ုပ်တို့သည်သခင်ယေရှုအပေါ်ရှုထောင့်သစ်ကိုပေးခဲ့သည်။ သူ့ကိုမြေကြီးပေါ်၊ မယုံနိုင်လောက်အောင်ရှုထောင့်မှမကြည့်တော့ပါ။ သူဟာဆရာကောင်းတစ်ယောက်မဟုတ်ပါဘူး သူဟာကောင်းမွန်စွာနေထိုင်တဲ့လူကောင်းတစ်ယောက်မဟုတ်ပါဘူး။ သူဟာကမ္ဘာပေါ်မှာသေနတ်တစ်လက်မထည့်ခဲ့ဘူး ..
အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်တော်မူ၏။ ငါတို့အဘို့အသေခံတော်မူပြီ။ သူကသူ့ဘဝကိုသူ့ဘဝကိုပေးဖို့သူ့အသက်ကိုပေးခဲ့တယ်။ ငါတို့ကိုအသစ်ဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။